ခေါငျးကိုကျသူမြား၊ ဒူးနာသူမြားအတှကျ – Shangyimm
Posted on March 25, 2021 March 25, 2021 by SHANGYI
ခေါငျးတအားကိုကျနလြှေငျ မသိသေးရငျ မြှဝထေားပါ။ ခေါငျးတအားကိုကျလို့ အိပျယာထဲလှဲနစေဉျ… ခဈြသူငယျခငျြး မ KyiSein ရောကျလာ ဆေးဖျောပေးတာ။
မီးဖိုခြောငျမှာရှိတဲ့ ဂငျြး၊ ကွကျသှနျနီ၊ ငရုပျသီးစိမျး၊ ငရုပျကာငျးမှုနျ့၊ နှငျ့ ဆားမြားကို ရနှေေးပူနဲ့ရောပွီး ဇလုံထဲထညျ့ပွီး ပူနစေဉျ ခွဖေဝါးကို အငှခေံ့ …. ခံနိုငျလောကျတဲ့ အပူကိုရောကျရငျ ခွမေကျြစိထိစိမျလိုကျတော့ ခြှေးတှပွေနျပွီး ခေါငျးကိုကျတာ သကျသာသှားတယျ။ ခုတော့ ကြှနျမ အလုပျထိုငျလုပျလို့ ရပွီပေါ့။ ကြေးဇူး မကွညျစိနျ။
မှတျခကျြ။ မိတျတလငျ၊ ပငျစိမျးနဲ့ စပါးလငျပါရငျပိုကောငျးတယျတဲ့။ ကြောကျခဲပါထညျ့စိမျပွီး နငျးနိုငျပါတယျတဲ့။ စိမျပွီးရငျ အဝတျနဲ့ခွောကျအောငျသုတျပွီး ၂ နာရီလောကျ ရအေေးမထိရဘူး၊ တမံတလငျးပျေါ ခွဗေလာနဲ့ မနငျးရဘူးတဲ့။ ရနှေေးပူလေးတဈခှကျပါ မှုတျသောကျလိုကျ … ရှယျပဲ။ ဒူးနာနတေဲ့သူလိုမြိုး ခွထေောကျပိုငျးနာနတေဲ့သူတှေ နတေို့ငျးလုပျသငျ့ပါသတဲ့ …. လကျတှကေ့ောငျးသှားလို့ မြှဝပေါရစေ။
ခေါင်းတအားကိုက်နေလျှင် မသိသေးရင် မျှဝေထားပါ။ ခေါင်းတအားကိုက်လို့ အိပ်ယာထဲလှဲနေစဉ်… ချစ်သူငယ်ချင်း မ KyiSein ရောက်လာ ဆေးဖော်ပေးတာ။
မီးဖိုချောင်မှာရှိတဲ့ ဂျင်း၊ ကြက်သွန်နီ၊ ငရုပ်သီးစိမ်း၊ ငရုပ်ကာင်းမှုန့်၊ နှင့် ဆားများကို ရေနွေးပူနဲ့ရောပြီး ဇလုံထဲထည့်ပြီး ပူနေစဉ် ခြေဖဝါးကို အငွေ့ခံ …. ခံနိုင်လောက်တဲ့ အပူကိုရောက်ရင် ခြေမျက်စိထိစိမ်လိုက်တော့ ချွေးတွေပြန်ပြီး ခေါင်းကိုက်တာ သက်သာသွားတယ်။ ခုတော့ ကျွန်မ အလုပ်ထိုင်လုပ်လို့ ရပြီပေါ့။ ကျေးဇူး မကြည်စိန်။
မှတ်ချက်။ မိတ်တလင်၊ ပင်စိမ်းနဲ့ စပါးလင်ပါရင်ပိုကောင်းတယ်တဲ့။ ကျောက်ခဲပါထည့်စိမ်ပြီး နင်းနိုင်ပါတယ်တဲ့။ စိမ်ပြီးရင် အဝတ်နဲ့ခြောက်အောင်သုတ်ပြီး ၂ နာရီလောက် ရေအေးမထိရဘူး၊ တမံတလင်းပေါ် ခြေဗလာနဲ့ မနင်းရဘူးတဲ့။ ရေနွေးပူလေးတစ်ခွက်ပါ မှုတ်သောက်လိုက် … ရှယ်ပဲ။ ဒူးနာနေတဲ့သူလိုမျိုး ခြေထောက်ပိုင်းနာနေတဲ့သူတွေ နေ့တိုင်းလုပ်သင့်ပါသတဲ့ …. လက်တွေ့ကောင်းသွားလို့ မျှဝေပါရစေ။